विकासका आधार तयार गर्दै सरकार–सांसद पाठक::Online News Portal from State No. 4
विकासका आधार तयार गर्दै सरकार–सांसद पाठक
सहकारीलाई मान्यता अनुसार काम गर्न आग्रह
बागलुङ, १० कार्तिक– प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. सुर्य पाठकले वर्तमान सरकारले विकासको लागि आवश्यक आधारहरु तयार गर्न सुरु गरेको बताएका छन् । शनिवार बागलुङ बजारमा प्रगति बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाको १२ औं साधारणसभा उद्घाटन गर्दै पाठकले यस्तो बताएका हुन् ।
आफ्नो कार्याकालमा आधारमुत विकासका आधारहरु तयार हुने गरी सरकारका काम कारवाही अगाडि बढेको पाठकले दावी गरे । भताभुंग अवस्थामा रहेको देशका हरेक क्षेत्रलाई सुधार गर्न सरकारले हाल सम्मको समय खर्चेको भन्दै पाठकले अवको केही महिनामानै सरकारका कामले गतिलिने विश्वास व्यक्त गरे । बिपक्षहरुले खोजेको जस्तो सरकार गठनको केही महिनामानै देशका सबै क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न असम्भव रहेको भन्दै पाठकले निर्वाचनका वेला गरेका प्रतिबद्धता पाँच बर्ष भित्रमा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा देशको अर्थ व्यवस्था निर्माण हुने भन्दै पाठकले मिश्रित खालको अर्थव्यवस्थाको पक्षमा वर्तमान सरकार रहेको बताए । सहकारीहरु उद्देश्य भन्दा पर गएर नफामुखी हुन थालेको भन्दै पाठकले सहकारीको मर्ममा रहेर काम गर्न सुझाव दिए । ‘सुख दुख बाढ्ने र उत्पादनमा सबैलाई जोड्ने माध्यामको रुपमा सहकारीले काम गर्न आवश्यक छ’ पाठकले भने ‘सहकारी क्षेत्रमा रहेका कमि कमजोरीलाई सुधार गरेर सहकारीका सुन्दर पक्षलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ ।’ हरेक संस्था अनुसासन र मर्यादाले मात्रै सफलतामा जाने भन्दै उनले सहकारीको अनुसासनमा रहन सहकारी संस्था र सहकारीमा आवद्ध सबैलाई आग्रह गरे ।
बागलुङ बजारमा सञ्चालनमा रहेको प्रगति बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाले गत आर्थिक बर्षको अन्त सम्ममा मात्रै १३ लाख भन्दा बढि मुनाफा कमाएको छ । बचत ऋण तथा उत्पादन मुलक कार्यक्रम मार्फत एक बर्षमा १३ लाख ३६ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ मुनाफा कमाएको संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले बताए । २ करोड ७५ लाख ५५ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ आम्दानी गरेको सहकारीले २ करोड ५० लाख ६२ हजार १ सय १५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । एक बर्षमा बचत तर्फ ५६ करोड भन्दा धेरैको कारोवार भएको सहकारीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ५ सय ६५ जना शेयर सदस्य रहेको संस्थाको ४ करोड ७० लाख ६८ हजार ५ सय रुपैयाँ शेयर पुँजी मात्रै जम्मा भएको छ ।